Wasiirka Maaliyadda Beyle oo ka hadlay arinta ganacsatada ka hadashay arin aan ahayn! - Latest News Updates
1- Canshuurta Dalka hala Mideeyo, canshuur isla mid ah badeecadda dekedaha dalka kasoo dega halaga qaado.
Ganacsatadaha reer Muqdisho ee Baabuurta ka ganacsada haddii dekedda Muqdisho marka uu baabuur kala soo dego Dawladda Federaalka ka qaado halkii baabuur 2000$, ganacsadaha lamidka ah isla baabuurkaa dekedaha kale ee dalka Maamulada ka taliyaa ka qaadaan 500$ , Baabuurtaana suuqyadda muqdisho isugu timaado Ganacsadaha Muqdisho ma shaqeysan karayaa? Badeecadaha kale sidoo kale.
2- Dawladda Federaalka maadaama dalka u dhaxeyso dalka si siman canshuur ha uga qaado, ha sameyso sharci dalka dhan ah, inta Federaalka leeyahay iyo inta maamulada leeyihiin. Macquul ma ahan in canshuurta dekedda muqdisho dawladda federaalka qaadato 100% halka dekedaha kale dalka dawladda Federaalka 0% tahay. Canshuurta la qaadana dadka Soomaaliyeed haloogu qidmeeyo.
3- Inta Canshuuraha Dawladda Federaalka ka mideynayso si aan ganacsatada Gobolka Banaadir suuqa uga bixin qidmo la mid ah mida ay qaadaan Maamul goboleedyadda gacanta ku haaya dekedaha kale ee dalka ha nalaga qaado.
WASIIRKA MAALIYADDA DR BEYLE.
1- Canshuurta hala bixiyo, markii hore canshuur lama qaadi jirin, waa in ganacsatada canshuurta bixiyaan.
* Wasiir Beyle dalka wuxuu u yaqaan Muqdisho, isaga oo ujeeda cabashada ganacsatada muqdisho ayuu iska indha tirayaa.
2- Caalamka (World Bank, IMF iyo UNSOM) ayaa naga doonaya inaan sida Aduunka Canshuurta u qaadno ,
* Caalamka Ma ganacsatada Muqdisho suuqa halaga saaro bay idin dhaheen, mana soo qaadateen?
#Somalia: Wasiirka Maaliyadda Beyle oo ka hadlay arinta ganacsatada ka hadashay arin aan ahayn!GANACSATADA…
Posted by Mohamed Dahir on Monday, February 12, 2018